Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji Kiss Via Zodiac Ama
site NIC Gaudette
emelitere ikpeazụ: Apr. 04 2020 | 3 min agụ
Mbụ nsusu ọnụ ị nwere na onye bụ otu n'ime ndị kacha oge na a budding mmekọrịta, na ihe unu abụọ ga-echeta mgbe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọjọọ mbụ nsusu, e na-emekarị ihe ọ bụla na-agbake site na. Gụọ na ịhụ otú ị kwesịrị ị na-susuo gị ụbọchị maka oge mbụ:
Mgbe mbụ ị susuo ihe Aries, ị na-emekarị na-adịghị echegbu onwe banyere aga kwa ngwa ngwa ma ọ bụ na-eche na nri oge. Ọ bụrụ na ị chọrọ susuo ha, na-eme ya na-enweghị oge. Ha ghọtara na ị seizing oge na ịbụ kpọmkwem. Mee ya ka ọ na-ekpo ọkụ na omiiko. Ọ bụ ezie na i kwesịrị ịma, na ha ga-eleghị anya susuo gị mbụ.
Mgbe mbụ ị susuo a Taurus, na ị chọrọ iji na-eche. Ị gaghị eme ya ngwa ngwa, na anaghị eme ka nsusu ọnụ na-ekpo ọkụ ma na ngwa ngwa. Nke a na-ịrịba ama prefers a ngwa ngwa ọkụ, mere ka ọ ikpeazụ. Ha agaghị na-reins, otú ị ga-mkpa. Mkpọnwụ ma ọ bụ susuo ha n'olu n'ihu gị susuo egbugbere ọnụ ha n'ezie na-esi na ha na-aga.
Mgbe mbụ ị susuo a Gemini, na-agwa ha na ị chọrọ susuo ha mbụ. Nke a na-ịrịba ama na-eme okwu mma karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ntakwu seductively na ntị ha, mgbe ahụ nibble na ya. Ata nri ha na ogwe aka ma ọ bụ ijide ha aka (ma chịa Gemini). Ụfọdụ Geminis ga ịnwụde mbụ, ma ha na-emekarị niile achụ nwoke ma ọ dịghị ịnwụde, otú ị ga-.
Mgbe mbụ ị susuo a Cancer, i kwesịrị ịma na ha na-omenala na-amasị ala gburugburu, otú ọ na njedebe nke ụbọchị na doorstep. Mgbe ị na-susuo ha, na-akwanyere ha gị na ogwe aka ya mere ha na-eche nchebe. Ekwela ka ọ na-aga na kwa ogologo, na atụla imetosi.
Mgbe mbụ ị susuo a Leo, mee ya ka ọ dị ka ịrịba ama dị ka ị pụrụ. Nke a na-ịrịba ama chọrọ ndụ dị ka a nkiri, na a ga-emechu ihu na ihe ọ bụla ot na-agwụ ike. Kiss ha n'okpuru moonlight, na mmiri ozuzo, ma ọ bụ nke dị n'etiti n'okporo ámá. Mee ya ka ọ omiiko na ise ya.
Mgbe mbụ ị susuo a Virgo, elele gị ume tupu. Ọ bụrụ na ị gaa nri abalị, see ụlọ ịwụ tupu ịhapụ iji jide n'aka na ihe ọ bụla a araparawo ezé gị na i nwere ike gbapụta a Mint ma ọ bụ jiri mouthwash. Ọ dịghị ihe ga-ha karịa isusu ọnụ a ruru unyi ọnụ. Mee ezi Usoro n'ihi na ha maara n'ezie ha stof.